सुनकोसीमा धमाधम ५० बाख्रा मरे, किसान चिन्तित - नेपालबहस
सुनकोसीमा धमाधम ५० बाख्रा मरे, किसान चिन्तित
| १६:२५:४५ मा प्रकाशित
११ असोज, सिन्धुपाल्चोक । सुनकोसी गाउँपालिका–७ मा धमाधम किसानका बाख्रा मर्न थालेका छन् । बाख्रा मरेर खोर नै रित्तिन थालेपछि पात्ले, कापिङ र आसपासका किसान चिन्तित बनेका छन् । पछिल्लो दुई साताका बीच ५० भन्दा बढी बाख्रा मरिसकेको र मर्ने क्रम नरोकिएको स्थानीयवासी सानु तिमल्सिनाले बताए ।
“कतिपयको त खोर नै रित्तिएको छ, धमाधम बाख्रा मरिरहेको छ”, तिमल्सिनाले भने, “गाउँपालिकालाई यसबारे सुनाउँदा कुनै चासो नै दिएन ।” पीपीआर रोगको सुई माग गर्दा गाउँपालिकाले पठाउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
गाउँपालिकाले सबै वडामा गरी नौ गाउँ प्रहरी राखे पनि किसानका बाख्रा धमाधम मरिरहँदा औषधोपचारमा दक्ष चिकित्सक खटाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखामा एक मात्र कर्मचारी छन् । पछिल्लो दुई सातामा कापिङमा स्थानीयवासी सीताराम तिमल्सिना, हरि तिमल्सिना, अर्जुन तिमल्सिना, अनिता तिमल्सिना र अन्यका गरी ४० बढी बाख्रा मरेको छ । “मेरो आफ्नै खोरका नौ वटा बाख्रा मरिसकेको छ”, सानुले भने।
स्थानीयवासीले पशु चिकित्सक पठाइदिन पटक पटक आग्रह गरेपछि गाउँपालिकाले बनेपाबाट दुई चिकित्सक झिकाएर रोग परीक्षणका लागि पात्ले र कापिङ क्षेत्रमा पठाएको उनले बताए । परीक्षण गर्दा रोग पहिचान नभएको र पीपीआरसँग मिल्दो लक्षण देखिएको गाउँपालिका पशु सेवा शाखाका रामचन्द्र जिसीले बताए ।
दलित परिवारलाई बाख्रा वितरण २ हप्ता पहिले
बाख्राको खोर निर्माण तालिममा सहभागी कृषक ३ हप्ता पहिले
नयाँ बर्षकोआगमनसँगै सिन्धुपाल्चोकमा पर्यटकको चहल पहल १ महिना पहिले
पहिरो प्रभावित दलित परिवारलाई आय वृद्धि गर्न बाख्रा वितरण १ महिना पहिले
पाथार्दीको बाख्राफार्म कृषकको आकर्षणस्थल बन्दै १ महिना पहिले
पाइपलाइन परीक्षण र सफाइ गर्दैं मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर-घरमा ! २ महिना पहिले
तपाईको जेठ महिनाको राशीफल कस्तो छ ? १७ घण्टा पहिले
आगामी ३ हप्ता विश्वको लागि निकै पीडादायी: जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डे ४ दिन पहिले
हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीले २२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्दै ७ दिन पहिले
बेलझुण्डीमा अक्सिजनको चरम अभाव,संक्रमितको अवस्था दयनीय ४ दिन पहिले
झापाका संक्रमित पत्रकारको घरमै औषधि ३ दिन पहिले
मर्निङवाकमा जाँदा जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परेपछि ३ दिन पहिले
फेरि अर्को हाईड्रोपावर कम्पनीले २४ लाख कित्ता आईपीओ ल्याउँदै ६ दिन पहिले
ओली, बोली र भोली २ हप्ता पहिले
धौलागिरि अस्पतालमा शय्या अभाव हुँदा बिरामीलाई सास्ती ३ दिन पहिले
मुस्ताङ र घुन्सामा नागरिक वैशाखमा हिउँ परेपछि दङ्ग ३ हप्ता पहिले
लोकसंस्कृति उत्थानका लागि ठाडो भाका प्रतियोगिता ३ हप्ता पहिले
स्पेन भ्रमण राष्ट्रहितका लागि फलदायी :अध्यक्ष तिमिल्सिना ४ हप्ता पहिले
वाइवाइ जिङ उपभोग गरेका उदयपुरका बिनोदलाई सिजिले दियो स्कुटर ३ हप्ता पहिले
दशैंँमा अर्को महंगी : तेल, दाल र गेडागुडीको मूल्य बढ्यो ७ महिना पहिले
नेपालमा ३० हजार संक्रमित : थप ८३८ जनालाई कोरोना, ११ जनाको मृत्यु ! ९ महिना पहिले
दुई दिनमा स्थानीय तहमा भत्काइयो ९३ छाउगोठ १ वर्ष पहिले
कोरोना जितेर घर फर्किए महामन्त्री कोइराला ८ महिना पहिले